> Resource > iPhone > Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ogaatid intaadan gadan loo isticmaalo iPhone
Waxaa la yaab ma laha in iPhone waa mid ka mid ah xubnihii ugu caansan ee technology casriga ah maalmahan. Tan iyo markii ay sii daayo asalka ah ee 2007, kuwaas oo casriga ah ee Kacaanka ayaa ugu badnaa suuqa iyo sababta waa wax iska cad, waayo, iyagu isu geeyo qalabka sida badan intii suurto gal ciyaaryahan ay ka mid yihiin muusiga, internet mobile, ciyaaraha, qalab wax soo saarka iyo telefoonka, dabcan. Sida racfaan sida ay tahay in inta badan macaamiisha ah, qiimaha laga yaabaa in aanay sidii la awoodi karo qof walba. Sidaas, waxa xal ah? Haddii brand cusub iPhone waa wax aadan awoodin aadan helin niyad weli. Waxaa jira qorshe kale oo uu iibsanayo used iPhone ah. Tani hubaal jari karaa kharashka, laakiin waxa ay leedahay in la qirtay in ay jirto khatar gaar ah. Waxaa jira faa'iidooyin gaar ah iyo khasaaraha ay u iibsato used iPhone ah. Waa in aad ku talax tagto oo dhan oo iyaga ka mid ah iyo go'aan ku salaysan in.
Waxaan aad oo dhan ka sheekayn doonaa kuwa khasaaraha iyo faa'iidada iyo talooyin ku eegayaan marka raadinayso gorgortan fiican ku used iPhone ah.
Faa'iidooyinka Gadashada loo isticmaalo iPhone
The Qasaaraha u Gadashada loo isticmaalo iPhone
Sida loo isticmaalay hubi iPhone iyo Tayada
Places Best in iibso / iibi iPhone ee America iyo Canada
Price List Isticmaalka iPhone
1. Ugu horeyn, faa'iido ugu weyn ee iibsashada used iPhone ah sida iska cad waa farqi weyn ee qiimaha. Waxaad ka heli kartaa kuwa loo isticmaalo qiimaha oo ka mid ah kuwa cusub kala bar oo ka mid ah kuwa la isticmaalo kaliya bil ama laba. Maxaad bixin boqolaal doolar oo dheeraad ah marka ay jirto doorasho jaban? Tani waa su'aal in badan ma ay noqon lahayd in jawaabi karin. Qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in xaqiiqda ah in ay sugaya daydo cusub, laakiin waxaa jira heshiisyo ku saabsan kuwa sidoo kale. Waxaa laga yaabaa inaad u ogaato meesha aad eegto.
2. Inkasta oo qaar ka mid ah "dadka qabatimay Apple" arko furitaanka iPhone cusub dhacdo sanadka oo ay diyaar u yihiin in line loogu istaago saacado inuu noqdo mid hore model cusub, qaar kale waxa ay u arkaan fursad ay si aad u hesho ugu fiican ee heshiiska ku qoraalkii ka weyn. Ugu muddadaas, qiimaha u ah dhamaan noocyada iPhone hore si wayn da'a, Oo waa dhan sabab u ah dareenka ay waqti yar gudihiis ku saabsan wax cusub. Qaar badan oo isku day in aad iibiso iPhone ay, in dhab ahaantii waa xaalad weyn, sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah oo keliya si ay u casriyayso in mid cusub. Tani waa fursad aad u hesho on iPhone loo isticmaalo heshiiska ugu fiican.
3. Marka raadinaya iPhone hoose jaban, waxa laga yaabaa inaad sidoo kale aad indho-dhan xayeysiis ka dukaamada kala duwan. Waxay bixiyaan iPhone cusub oo qiimo in muuqataa arrin qadar yar bil kasta, laakiin marka dhan biirsanaya sawirka si buuxda u badala. Gadashada iPhone loo isticmaalo waa fursad aad u bixiso yar qalab la rabay aan u saxiixay heshiis waqti dheer ah. Waxaad ku bixin wax walba ka hor, sidaas waxaa jira fursad ma is khiyaanaysay, ma lacagta ku maqan, kharash dheeraad ah ama wax la mid ah. Plus, ma garan kartid waxa mustaqbalka qabsaday kuu ah, isagoo phone wicitaanka noqdaan inuu yahay wax run ahaantii xun ka dib.
4. Faa'iidada kale ee iibsashada used iPhone ah waa in ay mar horeba la tijaabiyey baxay. Daydo Old maray oo dhan cayn kasta oo sharooto software iyo horumar. Waxa la iPhone cusub waa in ay u ekaan karaan mid soo jiidata, laakiin caadi ahaan waxay dhibaato ay ka soo arrimo farsamo la xiriira software cusub iyo sii daayo weyn. Waxaa jira waqti cayiman qabsiga in horumarinta u baahan tahay in uu dhammayn sheyga. Xaqiiqada ah in telefoonka ayaa loo isticmaali jiray in muddo ah waa in ay damaanad ayaa maray waqti tijaabo iyo maray oo dhan hagaajinta loo baahan yahay in ay si buuxda u shaqaynaysa.
5. Ugu dambeyntii, marka aad gadaneyso used iPhone aad si sax ah oo ku dayasho aad doonayso inaad iibsato oo dhan khasaaraha iyo faa'iidada og. Marka uu iibsigu phone dukaanka weyn ama online ka soo saaraha, aad si fudud u soo qaado tusaale ah, aad gacanta ku jirin in ka badan kuwaas oo qalab si dhab ah ay u socoto si ay kuu siiyaan. Ujeedadu waxay tahay in la isticmaalo iPhone aad u hesho in ay isku dayaan hawlihiisa hor bixinta lacagta. Waxaad la xiriiri kartaa iibiyaha, isagii ka hor tago oo hubi qalabka loogu talagalay oo dhan ayna duleella u ah, haddii ay jiraan wax. Qaabkan waxaad dhab ahaan waxa aad bixinta lacag u ogaan doonaa.
Full damaanad Qiimaha Hoose
Muuqaalada Newest No ajuurada maqan
Battery Full-nolosha No qandaraas muddo dheer ah
Xasuusta wayn Durba baaro iyo awood fulineed model
Arag oon doorsoomaynin
1. khasaaro ugu weyn marka aad gadaneyso used iPhone ah malaha waa arrin damaanad. New iPhone sida caadiga ah la Timaadda damaanad ah oo lagu kalsoonaan karo iyo kharashka adeegga lacag la'aan ah. Waxa kale oo aad xaq u leedahay in lagaa beddelo mid ah qalabka ay dhacdo in uu aqrinayo iin gudaha ee muddo 2 bilood ee ugu horeeya. Waxaas oo dhan waa la hubaa in ay soo saaraha ah, haddii ay taasi ku Apple, oo waxaa laguu xaqiijin karaa in aad ka heli doonaa tayo leh in aad bixinayso. Qaar ka mid ah iPhone loo isticmaalo waxaa laga yaabaa in damaanad sidoo, laakiinse iyagu ma ay noqon doonaan ilaa iyo inta kuwa ka mid ah kuwa cusub. Waxay noqon karaan sida gaaban sida 15 maalmood ...
2. Marka ay socoto iPhone loo isticmaalo inta badan fursadaha jira tusaalayaal. Sidaa darteed, waa in aad fahamtaa in aad ku allabaryaya qaababka qaarkood marka aad gadaneyso iPhone loo isticmaalo. Tusaalayaal aan haysan horumarinta software isku mid ah iyo tabo cusub sida kuwa ugu danbeeyay. IPhone ayaa loo isticmaalaa in aad beegsanayo laga yaabaa in aan ku keeni doontaa qaababka sida codkii ay gacanta ku-Siri, 3G xawaaraha, GPS, camera tayo sare leh, Nike +, iwm Sidaas, kahor inta aanad iibsan version weyn ee iPhone hubi in aad ma ay ceeboobi doonaan marka aad la kulanto in aan dhammaan Chine waxaa kasoo muuqday aad model.
3. Battery in sidoo kale la soo sheegnay, marka laga hadlayo ku saabsan khasaaraha uu iibsan iPhone loo isticmaalo. Batariga ee iPhone si toos ah depletes iyadoo la isticmaalayo sii; taas waxaa sabab u ah technology batari in qalabka ka. Nasiib darro, waa arrin adag in la fahmo in telefoonka ku saabsan in ay soo iibsato aad tahay ayaa batari dhaawacan ama ma; Halkan ka, waa faa'iido weyn. All aad sameyn karto waa in loo diyaar garoobo in iPhone ah loo isticmaalo, waxa ugu badan tahay, ma yeelan doonaan nolosha qofka ka mid ah sida mid cusub. The model wayn, ka wayn yahay fursad ah ay gabagabadu noqoto la batari saboolka ah.
4. xaqiiqda kale oo hoos u qiimaha ee iPhone isticmaalay waa in lagu daydo ka weyn sida caadiga ah xasuusta iyo meel drive adag ka yar. Taas macnaheedu waa in aad telefoon ma yeelan doonaan kaydinta sida ugu badan loo heli karo barnaamijyadooda, music, kulan, sawirada, filimada, iwm sida lagu daydo cusub. Farqiga u noqon karaan sida ugu badan ee 28 GB. Waa in aad ka fiirsan sida ay muhiim u yihiin kayd aad u marka loo eego awoodda aad telefoonka. Tani waa qayb ka mid ah ugu daran kuwa wax weyn album heesaha uruuriyaa oo jeclaan lahaa in aan u leeyihiin iyaga ku meel kasta oo ay tagaan.
5. khasaaro kale in qof kasta dareemi kartaa aqoon badan oo ku saabsan wax soo saarka oo aan waa soohdinta dhanka muuqaalka ah. IPhone isticmaalay sida caadiga ah cilladaha la isku qurxiyo kala duwan. Qaar ka mid ah waa ku adag tahay inay aragto marka ay wax gadashada, halka qaar kalena waa weyn oo ka badan iska cad. Tani waxay noqon kartaa dhibaato kuwa lacag bixisid si aad u ekayd fiiro badan. Waa maxay run ahaantii muhiim ah waa in aanay jirin magdhow shaashadda laftiisa. Sida iPhone ayaa touchscreen xakamaynta, wax xoqid shaashadda noqon kartaa dhibaato arrin. Xagashada shaashadda laga yaabaa in aanay arki sawirada marka wax iibsigu online, sidaa darteed waxaa jirta khatar aad u weyn.
1. Sida loo hubiyo iPhone damaanad?
Waa muhiim in la hubiyo damaanad marka aad gadaneyso iPhone loo isticmaalo. Tani waa u fududahay in la sameeyo la heli karin internet iyo lambarka taxan ama IMEI qalabka. Waxaad ka heli kartaa info taas ka dambeeya saxaarad SIM ah. Waxa kale oo aad ka heli kartaa lambarka taxanaha deeruhu qalabka ee Lugood iyo aadidda Kooban Device. Mid ka mid ah doorasho ka badan waa in aad iska baarto iyada oo qalab aad; u tag Settings> General> About> Number Serial. Marka aad ogaatid tirada taxanaha ah in aad u tagtaa website-ka rasmiga ee Apple: https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do, tirada taxanaha telefoonka ee "Gali hardware taxanaha tirada" sanduuq iyo saxaafadda sii. Waxaad arki doontaa wax sidan oo kale ka dib:
2. Sida loo hubiyo taariikhda ay hawshooda?
Marka uu iibsigu used iPhone ah, oo aad ku doonaysid in lagu hubiyo taariikhda ay hawshooda u soo dhowr ah gabagabadii kale oo ku caawin go'aan aad iyo inkale si ay u iibsadaan model in. Taariikhda hawshooda aad iPhone badanaaba waa dhow ama la mid ah sida damaanad ah. Waxaad wici kartaa Apple ee 1800-DALKAYGA-iPhone oo weydiiso oo ku saabsan taariikhda ay hawshooda aad telefoonka. Waxa kale oo aad eegi kartaa tirada taxanaha ah ama tirada IMEI qalabka la isticmaalayo si la mid ah ee aan soo sheegnay.
Sida aan ku sheegay, saddex meelood oo meel, "Dayactirka iyo Caymiska Service" muujinaysa taariikhda expriration oo ka mid ah damaanad hal sano ah. Sidaas, haddii dambeysta ah waa December 7, 2011, ka dibna aad iPhone ahaa qiyaastii shaqeysiin on December 7, 2010.
3. Sida loo hubiyo iPhone side network
Si looga fogaado madax xanuun dheeraad ah, waxaad ka iibsan lahaa halkii iPhone in haatan waa shaqaynayaa on shabakad in aad hadda la isticmaalayo. Waxaad had iyo jeer lagu furo karaan qalab ama u beddel side, laakiin haddii aad rabto in aad wax kasta si habsami leh u tago markaas hubi side shabakad ka mid ah qalabka ku. Waa kuwan sida ay tahay in la sameeyo: tagaan si ay http://www.imei.info oo geli lambarka IMEI in sanduuqa lagu siiyay. Kadib waxaad arkaysaa mid ah info:
Guji "Check network & simlock" oo wuxuu muujin doonaa macluumaad kala duwan (IMEI, Qaybta Description, Product Version, Mudada damaanad, info Carrier, xaaladda qufulka SIM) on qalab aad oo ay ku jiraan taas oo side qalab aad xiran yahay si ay u.
4. Sida loo doorto model ugu habboon baahidaada?
Fikradda asaasiga ahi waa in ay ka weyn model yahay, ka jaban ka ay kukacayaan. Trick waxaa, marka aad gadaneyso used iPhone ah, waa in aad raadiso model ah oo uu ka maqnaa suuqa ee ku saabsan sanad. Qiimaha lagu daydo sida ay horeba u hoos, laakiin waxaa kale oo ay leedahay qaybo ka mid aan shaqeyn. Waa in aad hubisaa in haddii ay wax ku dhacaan qalab aad, waxaa jiri doona qaybo loo baahan yahay la heli karo inaan ku saxno. Mararka qaarkood qarash yar dambe idinma badbaadin karaa kharashka ka weyn ka dib on. Waxaad ka eegi kartaa taariikhda soo-saarka ee telefoonka ah oo ag maraya in Dejinta> General> About
5. Sidee si aad u hubiso xaaladda batariga?
Durbadiiba waxaan ka hadalnay oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay xaaladda batteriga marka wax iibsigu iPhone loo isticmaalo. Waa ay adag tahay in la ogaado haddii batteriga si fiican loo wada ilaaliyo, ama aan waqti gaaban, laakiin waxaad weli ka heli kartaa qaar ka mid ah info in. Haddii aad qabto maalin ama laba maalmood si aad u hubiso batari iPhone, ka dibna waxa ay ka qaadaan in ay ka buuxa iyo u isticmaal sida aad si caadi ah samayn lahaa si aad u aragto inta ay socdaa. Halkan waa hal hab oo aad u isticmaali karto si aad u hubiso batteriga in waqti gaaban. Tag Settings> General> Isticmaalka. Halkan waxaad ka arki kartaa sida waqtiga uu soo maray tan iyo la soo dhaafay mas'uul buuxa oo ka soo gunaanad qaar ka mid ah si ay u.
6. Sida loo hubiyo bandhigay for pixels dhintay?
Pixels dhintay iyo arrimaha midabka waa wax kale oo aad mar walba hubiso marka socday u isticmaalay iPhone ah. Waxaa laga yaabaa inaad ka fekerayso in pixel a dhintay ama laba aan xitaa u muuqan lahaa oo dhan, laakiin sababta aan u hubiyo? Waxaa jira dhowr barnaamijyadooda heli karaa in ay taasi kuu sameyn karo. Waxay baaritaan ku sameeyaan qaab bandhigay qaybta dambe oo digtoon. Waxaad sidoo kale u tagi kartaa http://iphonedpt.awardspace.com/ iyo raac tilmaamaha si aad u hubiso in qalabka uu leeyahay wax pixels dhintay ama aan. Sida backlight LED ah, waxaad ku tijaabin kartaa by jiidayeen slider nuurka ka dhinac ilaa dhinac oo miisaanka ah.
7. Sida loo hubiyo bannaanka u ayna duleella u muhiim u tahay?
Iyadoo xagashada qaar ka mid ah laga yaabo in aysan muhiim ah, waa in aad fiiro gaar ah u dhimman la arki karo, dildilaaca dhalooyinka, ama kala goysyada dabacsan. Waxay noqon karaan sabab u tuuraan aad iPhone. Hubi in qalabka ay adag tahay; muraayadda hore iyo gadaal waa in si buuxda guutadii ahama steel anteeno. Dhibaatada ay leedahay dhimman waa in ay u dhaqmaan sida dhibcood pivot iyo in la yareeyo daacadnimada dhisme quraaradaha. Sidaas darteed, qalab waa mid aad u macquul ah in dhibco ah. Waxay sidoo kale u oggolaadaan boodhka gudaha telefoonka. Si loo baaro bannaanka ka ah iPhone waxaa geesgees u qaban oo ka soo jeeda codsan iftiinka xooggan. Haddii aad isku aragto wax sidan oo kale, ka dibna u gudbaan doorasho ee soo socda.
8. Sidee loo hubiyo camera?
Marka hore, hubi shutter labada, hore iyo gadaal kaamirooyinka. Waa in la furo iyo xirto mar kasta oo aad qaado sawir. Markaas, ujeedadoodu camera ee goobta wejiyo iyo tubbada ah in ay diiradda saaraan si loo hubiyo muujinta ah. Camera waa qabsato diiradda iyo iftiin ku salaysan meesha aad ku sawirnaa. Marka aad sawir qaaday, waa inuu meeshaas fiiriyaa, waayo pixellation, mardinta, midab, cad, iwm Haddii uu jiro mid ka mid ah arimahan, waxa ay noqon doontaa wax iska cad. Ha illoobin in aad tijaabiso camera video iyo sidoo; baaro iibiyo, loo maqli karo codka. Ugu dambeyntii, tijaabiyo fiilooyin flash hogaaminayo siyoodba geeska bidix ee sare ee shaashadda ilaa goob flash lagu qoray "on."
9. Sidee si ay u tijaabiso touchscreen?
Marka aad iibsanayso used iPhone ah, waa in aad sidoo kale touchscreen hubi sidoo by laba siyaabood oo deg deg ah. Hubi in aanay jirin baro dhintay telefoonka ku saabsan si aad u iibsato aad tahay. Waxaad ku samayn kartaa adigoo furitaanka barnaamij aqbala aqbasho qoraal, buugayga tusaale ahaan; ku qor ee "The dawaco brown deg deg ah Sapunaru Eey caajis" iyadoo la isticmaalayo dhammaan saddexda hanuunin makiinada: sawirka, muuqaalka dhirta la button guriga bidixda, iyo muuqaalka la button guriga ku yaal dhinaca midig. Tani waa hab fiican si aad u hubiso in ay jiraan wax dhibcood dhintay ama ma in. Kabacdi waa la baari karaa iyadoo furitaanka app Photo ah, xulashada sawir kasta, zooming in, iyo kabacdi fartaada oo dhan shaashadda. Haddii sawirka dhaqdhaqaaqa agagaarka flawlessly, ka dibna wax kasta waa u roon yahay.
10. Sidee loo hubiyo Jack headphone?
Marka hubinta Jack headphone ah iPhone inay hubiyaan in mar ku xirnayn sameeyo, gabi ahaanba ma jiraan wax u oynayo bareesada. Play warbaahinta qaar ka mid ah oo aad u hubiso haddii codka laga maqlayaa labada headphones. Haddii ay jirto wax dhibaato ah, isku day headphone kale dhigay iyo sidoo hor boodo natiijooyinka kasta. Dhibaatada waxaa laga yaabaa in headphones ah. Imtixaanka haddii gacanta ku headphone ee (play / hakin, track weeraryahanka / dib, Voice badan, mugga kor / hoos) shaqada si fiican.
Meelaha ugu fiican ee la soo iibso / iibi iPhone ee America iyo Canada
1. Arbacada ah - Arbacada ah uu leeyahay sumcad weyn marka ay timaaddo in la iibsada iPhone isticmaalay. Waxaa si joogto ah waxay bixisaa xulashada weyn ee alaabta. Haddii aad ka fogaato scammers ah, ka dibna ay tani waa mid ka mid ah fursadaha ugu fiican.
2. Amazon - Amazon sidoo kale bixisaa badan oo iPhone isticmaalo iib aheyn qiimo la goyn karo ilaa xad ah. Waxaa inta badan lagu iibiyaa by iibinaya xisbiga saddexaad. Just hubi-celin iyo faallooyinka iyo inta kale waa wanaagsan yahay.
3. Best Buy - Best Buy leedahay fursado yar ka dibna Amazon iyo Arbacada ah, laakiin waxa uu leeyahay faa'iido ah marka ay timaado qiimaha. Waxay qiimaha iPhone used aad u yar yahay.
4. AT & T - waxaad ka heli kartaa used iPhone ah ee aad dukaanka deegaanka AT & T ama website-keeda - http://www.att.com/shop/wireless.html. Waxay bixiyaan maraakiibta si degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo. Waxaa laga yaabaa in xulashada ugu qiimo jaban, laakiin hubaal ah mid ka mid ah ugu kalsoonaan karo.
5. NextWorth - waa mid ka mid ah shirkadaha sarrifka caan ah marka ay timaado kala iibsanayo iyo iPhone isticmaalay. Waxay bixiyaan qiimaha halkii rafcaanka ee http://www.nextworth.com.
6. qaran - qaran waa wax la mid ah Buy Best ah. Waxaa weli waa meel kale oo wanaagsan si aad u hesho used iPhone qiimaha ugu hooseeya internet-ka. Farqiga u dhexeeya waa in qaran ma bixiso fursad u iibsato qalabka iyada oo aan heshiis adeeg.
7. CowBoom - waa goob qiimo go'an iyo heerka ay yihiin wax yar ka sareeya halkan. Oo lagu daray waxa ay tahay in ay sida caadiga ah ku bixin siyaasadda ku laabto.
8. GameStop - Qaybta wanaagsan oo ku saabsan GameStop waa in ay ka danbeeyaan waxyaabaha ay u istaagaan. Waxaa loo tijaabiyey kuna damaanad qaaday in ay ka shaqeeyaan. Haddii ay taasi ma aysan dhicin, waxaad u soo celin karto 7 maalmood gudahood oo aad lacag dib u helaan.
9. Buy My Tronics - website waxtarkiisa laga yaabaa in aanay sida ugu fiican ee in ka mid ah u tartameen ', laakiin xaqiiqdii Istaaga leh ay adeeg macaamiil oo tayo.
10. Iibiya Deegaanka - iibinaya deegaanka ka mid ah saaxiibadaa iyo saaxiibadood. Waxa ugu wanaagsan ee ku saabsan ku iibinaya maxalliga ah waa in aad si dhab ah u helaan in ay qabtaan qalabka iyo calaamadee dhammaan sifooyinka muhiim ah ka hor inta aysan iibsan.
Arbacada ah http://www.ebay.com/ Auction Ku xiran tahay iibiyaha PayPal Waxay bixisaa Beecin
Amazon http://www.amazon.com/ Laga soo bilaabo $ 100 Ku xiran tahay iibiyaha Inta badan Major Lacagta Options Info on Iibiya
BestBuy http://www.bestbuy.com/ Laga soo bilaabo $ 300 2-8 Days Fursadaha American Express, Visa, MasterCard, PayPal iyo BestBuy Fursado yar
AT & T http://www.att.com/ Laga soo bilaabo $ 300 7-14 maalmood Inta badan Major Lacagta Options Fursado yar
NextWorth http://www.nextworth.com - Ku xiran tahay iibiyaha Inta badan Major Lacagta Options Waxay bixisaa bedasha
Qaran http://www.sprint.com/ - - MasterCard, Visa, American Express. Baro, Diner ee Club Heshiiska Service ayaa loo baahan yahay
CowBoom http://www.cowboom.com/ Laga soo bilaabo $ 80 2-7 Days PayPal, Amazon iibsiga, MasterCard, Visa, American Express Baro Waxay bixisaa siyaasadda soo laabtay
GameStop http://www.gamestop.com/ Laga soo bilaabo $ 50 2-5 maalmood Inta badan Payment Options Major Guarantee Money-dhabarka
BuyMyTronics http://www.buymytronics.com/ Auction Ku xiran tahay iibiyaha PayPal, Check A + Adeegga Macmiilka
In la soo koobay, iibsashada iPhone loo isticmaalo waa hab fiican si loo badbaadiyo boqolaal doolar. Si kastaba ha ahaatee, waa in aad diyaar u dhan khasaaraha ah in laga yaabo in la soo. Nasiib wanaagsan!
Min ee Price
Max of Price
iPhone 3G ~ $63.86 $ 17.5 $254.90
16GB $65.24 $ 25 $ 149
iPhone 3GS ~ $85.05 $ 24 $ 500
8GB $72.65 $ 30 $ 500
16GB $87.91 $ 24 $ 500
32GB $94.61 $ 30 $ 190
iPhone 4 ~ $165.35 $ 50 $338.95
8GB $149.93 $ 50 $ 300
iPhone 4s ~ $272.65 $ 150.00 $425.00
16GB $238.01 $ 150.00 $425.00
5c iPhone ~ $395.32 $139.00 $1200.00
Source: 2014, March maalinta Arbacada ah
Iibi iPhone Your jaban qiimo wanaagsan